ပင်နယံဂီယာစီးရီးဖြတ်စက်၊ ဥယျာဥ်ခြံမြေသုံးကိရိယာဖြစ်သည့် ကိုင်းဖြတ်ကတ်ကြေး၊ သစ်ကိုင်းအသေး ဖြတ်ကတ်ကြေး၊ လှေကားအရှင်၊ ပုံလောင်းထားသည့် ထုတ်ကုန်များ | မြန်မာ | hardware | CENS Global Pass - Multi-lingual sourcing guide
CENS Global Pass > မြန်မာ > hardware > Company Page
ပင်နယံဂီယာစီးရီးဖြတ်စက်၊ ဥယျာဥ်ခြံမြေသုံးကိရိယာဖြစ်သည့် ကိုင်းဖြတ်ကတ်ကြေး၊ သစ်ကိုင်းအသေး ဖြတ်ကတ်ကြေး၊ လှေကားအရှင်၊ ပုံလောင်းထားသည့် ထုတ်ကုန်များ
hardware / မြန်မာ
ဒီပုဒ်မကို PDF ကို Download လုပ်
ထိုင်ဝမ် ၏ အချက်အခြာသော မြို့တော်ဖြစ်သည့် Taichung တွင် 1991 ခုနှစ်၌ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် Wise Center Industrial Group Inc အနေဖြင့် ဥယျာဥ်ခြံမြေသုံးကိရိယာများအား တီထွင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင် အားထားရသည် ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရလျက်ရှိပါသည်။
သစ်ကိုင်းအသေး ဖြတ်ကတ်ကြေး၊ ကိုင်းဖြတ်ကတ်ကြေး၊ အပင်ညှိရာတွင်သုံးသည့် ခေါင်းရှည်ကတ်ကြေး၊ မြက်ရိတ်ကတ်ကြေး၊ သစ်ကိုင်းဖြတ်စက်အရှည်၊ ရေပိုက်ဖြတ်ကတ်ကြေး၊ ကိုင်းဖြတ်ကတ်ကြေး၊ လွှနှင့် PVC ပိုက်ဖြတ်စက်၊ ရေဖြန်းခေါင်း၊ ဂေါ်ပြား၊ ထွန်ခြစ်၊ ခြေနင်းခုံ/လှေကားတိုနှင့် အခြားဥယျာဥ်ခြံလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် တန်ဆာပလာများအပါအဝင်၊ ပန်းညှပ်ကတ်ကြေး၊ သမားရိုးကျနှင့် ခေါက်၍ရသည့် လှေကားအရှင်တို့အား ကုမ္ပဏီမှ အဓိထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။
အသစ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် "ပင်နယန်ဂီယာ" စီးရီးကိရိယာများ အပါအဝင် ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များအား မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပ၊ ဂျပန်၊ သြစတြေးလျနှင့် တရုတ်တို့တွင် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ OEM (ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့် မူရင်းကိရိယာထုတ်လုပ်ခြင်း) နှင့် ODM (ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့် မူရင်းဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်း) တို့အပြင်၊ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ အမှတ်တံဆိပ်များအောက်၌ ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များအား စျေးကွက်တွင်ရောင်းခြခြင်းဖြစ်သည့် OBM (ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့် မူရင်းအမှတ်တံဆိပ် ထုတ်လုပ်ခြင်း) ကိုလည်း အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
Wise Center ၏ လက်ရှိအောင်မြင်မှုတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းမှာ R&D လှုပ်ရှားမှုများကို စဥ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ DIY (တစ်ကိုယ်ရေးသုံး) နှင့် လုပ်ငန်းအသုံးချမှုအတွက် သုံးရလွယ်ကူပြီး၊ ပေါ့ပါးသည့် ဥယျာဥ်ခြံလုပ်ငန်းသုံး ကိရိယာများ တီထွင်နိုင်ရန်၊ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဂီယာနှင့် ကုတ်အားဆိုင်ရာ စက်ကိရိယာများအား စဥ်ဆက်မပြတ် အဆင့်မြှင့်တင်နေပြီး အသွားပါသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ဖန်တီးမှုအတွက် ပြည်တွင်း R&D အသင်းအဖွဲ့များနှင့် အတူတကွလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင်၊ ဤထုတ်လုပ်သူမှ IQC (ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု)၊ IPQC (ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု)၊ QA (အရည်အသွေးအာမခံချက်) နှင့် TS16949 တို့နှင့်အညီ သမားရိုးကျ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကိုလည်း စဥ်ဆက်မပြတ် အလေးပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဂျာမနီ၏ GS (GeprUfte Sicherheit) စံချိန်စံညွှန်းများဖြင့် ထောက်ခံချက်ရထားသည့် ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီမှ ISO 9001: 2000 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အတည်ပြုချက်ရထားသည့်အတွက်ကြောင့် ကြိုးစားမှုများမှာ အရာထင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်မှုတွင် ချွတ်ယွင်းမှုနှုန်းမှာ ထုတ်ကုန်အခုရေတစ်သန်းလျှင် (1) ခုအောက်ပင် လျော့နည်းပါသည်ဟု အခိုင်အမာဆိုပါသည်။
အထူးသဖြင့် အလုပ်သမားများအား မဝရေစာပေး၍ခိုင်းသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် ဝယ်ယူသူများနှင့် အစိုးရတို့အကြား တာဝန်ခံယူသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်အောင် တောင်းဆိုမှုများကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ တိုးပွားနေချိန်တွင် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမားကြံ့ခိုင်မှုအား အလေးထားသည့် လှုမှုရေးနားလည်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Wise Center မှ တံဆိပ်တပ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ထောက်ကန်ပေးနိုင်ရန် အမှန်တကယ်ကူညီပေးနိုင်သည့် သိသာထင်ရှားသည့် အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ယုံကြည်အားကိုးရသော ပေးသွင်းသူဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်ထိ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ နေ့စဥ်လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ပုံနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး၊ စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အလုပ်သမားများ၏ စွမ်းဆောင်မှုများအား ဥယျာဥ်ခြံလုပ်ငန်းသုံး ကိရိယာများ၏ ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် သုံးစွဲသူများထံမှသာမက ဥရောပမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့အစည်းများထံမှပါ ထောက်ခံချက်ရထားသည့် BSCI စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် အဆင့်မြှင့်တင်လျက်ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ဥယျာဥ်ခြံလုပ်ငန်းသုံး ကိရိယာများထုတ်လုပ်မှု နယ်ပယ်တွင် ဦးဆောင်သူအဖြစ် ၎င်းရဲ့အဆင့်အတန်းအား ပိုမိုသာလွန်ကောင်းမွန်စေရန် Wise Center ၏ မကြာသေးမီကမှ လှုပ်ရှားခဲ့သည့် တိကျပြတ်သားသည့် ခြေလှမ်တစ်လှမ်းမှာ BSCI (လူမှုအကျိုးပြု စီးပွားရေး လှုပ်ရှားမှု) စောင့်ကြည့်သည့်စနစ်နှင့်အညီ စက်ရုံတွင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည့် အခြေအနေများအား မြှင့်တင်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အစီအစဥ်ဖြစ်ပါသည်။
Company: WISE CENTER PRECISION APPLIANCE CO., LTD.
Address: No. 18, Wei6Rd., Chungkang EPZ., Tsao Nan Borough, Wuchi Dist., Taichung City, Taiwan 435
Tel: 886-4-2657-0580, 2657-0590
oung Lee Steel Strapping Co., Ltd.
သံမဏိ ပတ်ကြိုးပြားများ၊ အအေးခံကြိတ်ယူသည့် သံမဏိ အခွေများ၊ သံမဏိ ပရိဘောဂ ပြွန်များ၊ သန့်ရှင်းရေး စက်ပစ္စည်းများ၊ စင်များ၊ သိုလှောင်ရေး စင်များ၊ ပွတ်တံပါသည့် အိမ်သာသုံးစက္ကူ ထည့်စရာ